Etu esi ewu ma tolite listi Email gi | Martech Zone
Etu ị ga-esi wuo ma tolite listi Email gị
Fraịde, Septemba 4, 2015 Sọnde, Septemba 6, 2015 Douglas Karr
Brian Downard nke Eliv8 arụla ọrụ ọzọ dị egwu na akwụkwọ ozi a yana nyocha usoro ịre ahịa n'ịntanetị (download) ebe o tinyere ihe ndeputa a maka itolite listi email gi.
Anyị na-arụ ọrụ ndepụta email anyị, aga m etinye ụfọdụ n'ime usoro ndị a:
Mepụta Ibe Ndata - Anyị kwenyere na ibe ọ bụla bụ peeji ọdịda… yabụ ajụjụ bụ na ị nwere usoro ntinye na peeji ọ bụla nke saịtị gị site na desktọọpụ ma ọ bụ ekwentị?
Jiri Enyemaka Ọdịnaya-Na - Mara na nke a bụ onyinye bara uru ma dịkwa mkpa. Inye ihe iPad nwere ike ịnweta ọtụtụ ndị chọrọ ịbanye na ịbawanye akụkọ SPAM gị mgbe ha natara ozi-e na-adịghị mkpa.
Tinye Optdị Nwepu-Na saịtị gị - Anyị wuru opt-in forms dị ka akụkụ nke CircuPress n'ihi na anyị maara otú ha dị oké egwu. Ugbu a, anyị na-agbasa ọrụ ha!
Direct okporo ụzọ na Oku na-Action - Gwa ndị mmadụ ihe ha ga-eme ọzọ, gosi ha ihe kpatara ha ji eme ya, na ebe aga eme ya.
Jiri Akaụntụ Social na Detuo gị - Ugoro na nyocha na-ewulite ntụkwasị obi na ntụkwasị obi na-eme mgbanwe.
Na-anakọta ozi ịntanetị na Yourlọ Ahịa gị - lọ ahịa, ihe omume, ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ụlọ ahịa kọfị… ebe ọ bụla ị nwere ike ịnakọta ozi email site na iji ikike onye ahụ, mee ya!
Jiri Video Nkọwapụta - Ọ bụrụ na foto ruru otu puku okwu, vidiyo na-akọwa ihe ruru ọtụtụ nde.
Jiri Ọganihu ọdịnaya - Ikwa njakịrị ụfọdụ ọdịnaya ndị ọzọ bụ ụzọ dị mma iji hapụ onye tinyegoro ọrụ ịbanye!
Kpatụ n'ime Ike nke Nzaghachi - Weghara nzaghachi ma banye ndị folks ahụ!
Mepụta vidiyo vidiyo na Wistia - Wistia nwere ụfọdụ ngwa ọrụ dị egwu maka ịgbanye vidiyo na ọgbọ ọgbọ - jiri ha!
Jiri anya nke uche gị hụ okporo ụzọ nke saịtị gị - Kedu ka ndị mmadụ si agagharị na saịtị gị ma ị na-arịọ ha ka ha pụọ ​​na usoro ahụ?
Jiri Uru bara ọgaranya, Detuo Usoro Ederede - Kwụsị na atụmatụ ugbua, gosi folks uru!
Mee Ozi Dị Nbudata - Ọ ga-eju gị anya na mmadụ ole ka hụrụ mkpụrụ edemede ahụ siri ike ịchekwa maka oge na-adịghị anya.
Anakọta Ozi ịntanetị Ozi - Ha na-eme nkwa, ugbu a ọ bụ oge iji kpọghachite ha na email.
Jiri Wepụ Mmetụta Mgbapụta Pụrụ Iche - Nke a bụ ohere ikpeazụ ị nwere iji nweta onye ọbịa ọhụrụ na saịtị gị, jiri ya!
Nabata onye mmegide - Dị ka onyinye gị, gbaa mbọ hụ na asọmpi gị dabara ndị na-ege gị ntị ma nye uru.
Mee ngwangwa weebụsaịtị gị - A na-akọrọ weebụsaịtị ngwa ngwa, a họọrọ ya ma gbanwee ndị ọbịa ka mma.
A / B Nyochaa Ihe niile - Ọ bụrụ n ’ị nwere ike ịbawanye ọnụego opt-in gị okpukpu abụọ, ị ga - eme? Nyocha A / B ga-enye gị ohere ahụ.
Direct okporo ụzọ Slideshare - Slideshare bu uzo di nkpa iji kesaa ihe omuma gi… mere ka ndi ahu laghachi na saiti gi na hotlinks na ihe ngosi gi.
Jiri Kaadị Kaadị Twitter - Tweets na-efegharị na agụghị agụ… mana onyonyo ozigbo izi ozi ahụ ma nye ohere iji jide onye na - agụ ya.
Zaa Ajụjụ na Quora - Nye uru ha ga-abịa!
Tags: ab uleAnalyticskpọọ ka emekpọọ n’ọrụnakọta ozi ịntanetịemail na-ekwu okwuọdịnaya na-enyeọdịnaya nweta nkwaliteoyiridownloadọpụpụ ebumnuchenkọwa videonzaghachitoo ndepụta emailmbido peeji nkeopt-in ọdịnayaụdị opt-inquoraokporo ụzọslidesharenkwado mmadụkaadị ndu twitteranyaọsọ ọsọamamiheederede ederede
Ndepụta nke ndị na-enye SaaS na mmefu ego ha
8 Echiche eserese iji zụọ azụmahịa gị na Instagram
Sep 6, 2015 na 5:25 PM
Hey Doug, daalụ ọzọ maka ịkekọrịta ihe ọmụma m! Obi dị m ụtọ ịgụ ihe ndị ị kwuru gbasara usoro ọ bụla.
Sep 6, 2015 na 8:24 PM
Unu ndi mmadu na emeputa ihe omuma oge obula, Brian! M ga-ekewa onwe m dị ka ihe snob infographic. 🙂 Mee ka m mara mgbe ọ bụla ị bipụtara otu!